नेपाल आज | अन्जना जसले ओलीलाई मृगौला दिएर बचांइन
शनिबार, ०१ जेठ २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
केपी ओली अहिले राजनीतिको मियो बनेका छन् । उनले जेलनेल भोगका छन् । संर्घषका कैयौं घुम्ति पार गरेका छन् ।
तर, यत्तिले मात्र उनी प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । प्रधानमन्त्री बन्न उनी जिवित हुनुपथ्र्यो । उनलाई जीबन दान गरेकी हुन अन्जना घिमिरेले । अन्जनाको मृगौला छ ओलीको शरीरमा ।
अन्जनाले मृगौला दान नगरेको भए ओलीको जीबन के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न । २०६४ सालमा ओली निकै विरामी परे । उनका दुबै मृगौला फेल भइसकेका थिए । चिकित्सकले प्रत्यारोपण गर्दा राम्रो हुने सुझाए । डायलासिसले जीबन जिउन मात्र सम्भव हुन्थ्यो । राजनीतिमा सक्रिय हुन सम्भव हुंदैनथ्यो । प्रत्यारोपण त गर्ने ? तर कस्ले दिन्छ मृगौला ? ओली असमञ्जमा परे । परिवारभन्दा बाहिरको मृगौला लिन कानुनी झण्झट थियो ।
परिवारभित्रबाट दिने को होला ? ओली इन्तु न चिन्तुमा परे । ओलीको चिन्ता दूर गरिदिइन् अन्जना घिमिरेले । नाताले भाइ बुहारी पर्ने अन्जना ओलीका लागि नयां जीबन दिलाउने आमा बनेर उपस्थित भइन् । ०६४ सालमा २१ बर्षकी मात्रै थिइन् अन्जना । अन्जनाले आंट गरेपछि ओली हच्किए । बच्चीको मृगौला लिएको भनिठान्लान भनेर उनले अन्जनाको मृगौला नलिने सोचपनि बनाए । तर, अन्जनाले मृगौला दिइछाड्ने जिद्धि गरिन । अन्जनाका बाआमासंग पनि छलफल भयो । एमालेको राजनीतिमा सक्रिय उनीहरुले ओली बचाउन त्याग गर्ने बताए ।
अन्जना १५ महिनाको काखे छोरोलाई घरमै छोडोर मृगौला दान गर्न दिल्ली हानिइन् । दिल्ली स्थित एपोलो हस्पिटलमा ओलीको मृगौला फेरियो । मृगौला दान गरेवापत उनले केही प्रतिफल खोजिनन् । सामान्य जीबन जिएकी छन् । अन्जनाले मदन भण्डारी स्कुलमा केही समय पढाइन । त्यस्तै सहकारी र होलसेल पसलमा काम गरिन । आफ्नै किराना पसल संचालन गरिन । केही महिनासम्म अन्नपूर्ण पोष्टमा पनि काम गरिन अहिले उनी सामान्य जीवन विताइरहेकी छन् । मानिसका सामान्यतया दुईवटा मृगौला हुन्छन् ।
स्वश्थ मानिस एउटै मृगौलाको भरमा बांच्न सक्छ । त्यसैले अन्जनाले एउटा मृगौला ओलीलाई उपहार दिएकी थिइन् । मृगौला पीडित ओलीले अहिले डायलासिस निशुल्क गर्ने निर्णय गरेर मृगौला पीडितको पीडामा मल्हम लगाउन खोजेका छन् । राष्ट्रिय मृगौला पीडित संघ नेपालका अध्यक्ष समिर पोखरेल ओलीप्रति सो निर्णयका लागि अनुग्रहित छन् । भन्छन्, ‘ओलीजिले राम्रो काम गर्नुभो । अब प्रत्यारोपणका लागि खुकुलो व्यवश्था गर्नुपर्छ । मृत्यु भएका मानिसको मृगौला झिक्ने र मृगौला पीडितकोमा प्रत्यारोपण गराउन मिल्ने कानून ल्याउन पर्छ ।’
डायलासिस गराउने बिरामीले जीबन जिउनेमात्रै हो । सक्रिय हुन सक्दैन । मृगौला प्रत्यारोपण गरिएकाहरु तुलनात्मकरुपमा सक्रिय हुन सक्छन् । पोखरेल थप्छन्,‘ओलीजी आफैं यसको भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, अब प्रत्यारोपणपनि निशुल्क गर्नुप¥यो ।’ कसैले मृगौला दान दिएपनि प्रत्यारोपण गर्न लाखौं लाग्ने हुंदा अधिकांश पीडित प्रत्यारोपण गर्ने आंट गर्न सक्दैनन् । प्रस्तुति: नेत्र पौडेल